उनी हुन् दुनियाँकै ‘सुपर मम’ यति ज´वान की छोरा साथमा हुँदा उमेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन ! (तस्विर हेर्नुहोस्) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/उनी हुन् दुनियाँकै ‘सुपर मम’ यति ज´वान की छोरा साथमा हुँदा उमेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन ! (तस्विर हेर्नुहोस्)
एजेन्सी । केहि मानिसहरु उमेरविहीन हुन्छन्, विशेष गरी केहि महिलाहरु। यी चिनियाँ महिला यसको लागि जीवित उदाहरण हो। तपाईं सोच्नुहुनेछ कि उनको तपाईले सोचेको उमेरको आधापनि मिल्दैन । देख्दा मात्र अनुमान गर्न असम्भव छ । तर जब तपाईं यस महिलाको कथा पढ्नुहुनेछ, तपाईंलाई थाहा हुनेछ ।हामी के भन्न खोजिरहेका छौं भने उनी हेर्दा र उमेरमा भिन्न छिन् । तस्विरकी यी चिनियाँ महिला, लियू येलिन अब ५० बर्ष नजिक छिन् । उनीसँगै रहेका यी युवक उनका छोरा हुन् । तर यी सुन्दर महिलाको साथमा रहेका यी युवकले विडम्बना भोगिरहेका छन् । कुरा यो हो कि मानिसहरूले उनलाई आमासँगै हिँड्दा ब्वाईफ्रेण्ड सम्झन्छन् ।
यदि तपाईं उनको तस्वीरमा हेर्नुहुन्छ भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि मोहित सुन्दरताको अनुहारमा एक झिम्का पनि छैन। र उनको उमेरको बावजुद, उनको शरीर सुपर टोन र आकारमा छ। सोशल मिडियामा उनको तस्वीरहरु संग, लियू मानिसहरु लाई यथोचित सुन्दर हुनु को लागी आश्चर्यचकित गर्दछ।जब उनी शपिंगमा जान्छन् र मान्छेलाई उसको उमेर बताउँछिन्, तिनीहरूले उनलाई अनौंठो प्रश्नको साथ कदर गर्दछन् । कसरी यस्तै जवान राखिराख्न सक्नुभयो ? सबैको प्रश्न यही हुन्छ ।